Ahoana ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories: inona no vaovao amin'ny Instagram | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, About us, Tutorials
Miatrika iray hafa amin'ireo vaovao manandanja ao amin'ny Instagram izahay rehefa mampiditra ireo sticker hametraka fanontaniana amin'ny Instagram Stories. Rindrambaiko iray izay lasa ankafizin'ny mpampiasa an-tapitrisany noho ny fanolorany interface madio ary mifantoka amin'ny traikefan'ny mpampiasa izay lavitra ny Facebook mihitsy.
Amin'ity indray mitoraka ity, toy ny amin'ny tranga hafa, Instagram dia nanao azy io ho ofisialy ny fahatongavan'ireo taratasy fametaka fanontaniana amin'ny Tantara. Izany hoe, azonao atao ny mametraka fanontaniana amin'ireo olona ifandraisanao sy mpanaraka anao mba hahazoanao hevitra na hahafantatra fotsiny ny heviny amin'ny lohahevitra manokana.
1 Instagram dia manampy iray amin'ireo stickers mahaliana ireo
2 Ahoana ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories
Instagram dia manampy iray amin'ireo stickers mahaliana ireo
Ny sticker amin'ny Instagram dia mamela antsika hiditra amina asa vaovao hanomezana traikefa iray hafa an'ireo mpanaraka izay manaraka azy ireo tsirairay avy. Ny tantara Instagram lasa revolisiona tanteraka izy ireo ary fantatry ny tambajotra sosialy tsara izany, ka isaky ny andro vitsivitsy dia mitondra vaovao.
Amin'ity indray mitoraka ity dia ny fanontaniana ao amin'ny Instagram Stories ireo izay mandray ny andraikitra rehetra amin'ny tambajotra fa amin'ireny maripana malefaka ireny dia mandray ny andraikitra lehibe indrindra. Fotoana fohy taorian'ny fivoriana ilay fampiharana Instagram vaovao antsoina hoe IGTV ary izany dia ahafahantsika mampakatra horonantsary maharitra amin'ny tambajotra sosialy.
Ary tsy Tsy sticker amin'ny fanadihadiana na sticker sticker emojis izy ireo, izay mamela antsika hametraka fanontaniana. Eto dia mivelatra ny fanontaniana, izay mitondra an'io asa vaovao io amin'ny làlana hafa, andrasan'ny maro amin'ny tambajotra sosialy misy ny consonance toy izany eo amin'ny fiainantsika.
Ny tiako holazaina dia inona miresaka fanontaniana misokatra izahay miaraka amin'ny valiny vitsivitsy izay mety ho lava be amin'ireo mpanaraka na mpifanerasera ananantsika. Mampiavaka azy amin'ny stickers roa voalaza etsy ambony, ary manokatra tontolo azo atao amin'ny tambajotra sosialy Instagram.
Ahoana ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories
Ny iray amin'ireo hatsaran-tarehin'ilay taratasy fametaka fanontaniana dia ny hananantsika ny fahaizana mizara ny fanontaniana ary koa ny valiny amin'ny tantara Instagram vaovao. Ka ny atiny mety hiteraka ny fanontaniantsika dia mety ho lasa Tantara Instagram hafa ary toy izany koa amin'ny doka infinitum. Ao amin'ny tambajotra sosialy dia fantatr'izy ireo tsara ny zavatra rehetra ananan'ny mpanaraka an-tapitrisany izay ananany manerana ny planeta; ankehitriny dia misy mpampiasa 400 tapitrisa mahery mampiasa azy ireo isan'andro.
Ny voalohany dia mamorona iray amin'ireo Tantara Instagram.
Manana ny sticker eo an-tampony izahay miaraka amin'ilay sary famantarana mitsiky. Tsindrio izany.
Manery izahay momba ny sticker ny fanontaniana.
Ankehitriny dia tsy mila mametraka ny fanontaniana fotsiny isika ary mametraka azy amin'izay toerana tiantsika amin'ny tantaran'ny Instagram.
Fotoana hanokafan'ny mpanaraka anao na ny fifandraisany amin'ny Instagram Stories anao, ho hitanao ny sticker izay azo kitihina raha te hamaly ny. Tsy misy fetra valiny, midika izany fa ho afaka hamaly imbetsaka ireo mpampiasa nefa tsy misy olana.
Ary ho an'ireo izay nandefa ny fanontaniana tao amin'ny Instagram Stories, hahita ny valiny ao amin'ny lisitry ny mpijery. Tsindrio ny valiny mba hahafahanao mamorona, raha tianao, ny tantara Instagram vaovao izay hiseho miaraka amin'ny fanontaniana inona no valianao. Amin'izany fomba izany, ny atiny dia hiteraka hatrany mandra-pahatongan'ny olona iray manao azy.
Ny iray amin'ireo pitsopitsony tokony ho raisina momba ity endrika fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories ity dia, raha ho afaka hahita ny mpampiasa nanao ny valiny tsirairay ianao Ao amin'ny lisitry ny mpijery anao, rehefa mizara izany valiny izany amin'ny tantaranao ianao dia tsy haseho ny sary sy ny anaran'ny mpampiasa anao.
Ka efa fantatrao ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories ho iray amin'ireo vaovao manandanja indrindra amin'ny tambajotra sosialy tato anatin'ny volana vitsivitsy. Etsy ankilany, azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny kinova 52 amin'ny Android, noho izany jereo tsara ny Google Play Store na mandehana maka ny APK eto ambany.
Ampidino ny Instagram APK.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba fametrahana fanontaniana amin'ny Instagram Stories: ny zava-baovao ao amin'ny Instagram